एक धार, कम्प्युटर समस्या को समाधान के हो
म एक परिष्कृत कम्प्युटर प्रयोगकर्ता बोलाउन थियो। शायद यो अब तिनीहरूले सम्भवत, सम्झना, विश्वास गर्न गाह्रो छ, तर म आधारभूत नियमहरू सुरु हुने, एक कम्प्युटर प्रयोग गर्न सिक्न आवश्यक र5वर्षीया बालक। म के भन्न सक्नुहुन्छ? केही मानिसहरू नयाँ उपकरणहरू प्रयोग गर्न कठिन पुरानो स्कूल हो।
अब म र एक पीसी जोडिएको छ कम्प्युटर रूपमा ल्यापटप खरीद सोच्न सकिन्छ, र टिभि दुई व्यक्तिगत कम्प्युटर को यस्तो ग्रिड, उत्कृष्ट पैदावार थियो। अब म कसरी टीभी एक ल्यापटप जडान अन्य कम्प्युटर र सैद्धांतिक नजिकै ज्ञान आफ्नो कम्प्युटर जडान गर्न थाहा छ। चाँडै म अभ्यास र यो ज्ञान लागू गर्न सक्षम थियो। एक पीसी गर्न TV जडान गर्न, तपाईं हात मा एक विशेष केबल र अनुकूल आदानों \_ outputs संग एक पीसी छ गर्न आवश्यक छ।
अब म आफूलाई विश्वस्त प्रयोगकर्ता विचार गर्न सक्छौं - फेला पार्न र बस वर्ल्ड वाइड वेब मा केहि बारेमा डाउनलोड गर्न तपाईंको सिस्टम कसरी कन्फिगर गर्न बुझ्छु। कारण साइट गठन को उपयोगिता मलाई केही खर्च। त्यसैले, को मामला मा समस्याको सुलझाने तपाईं जो कोहीले विन्डोज ब्यानर हटाउन, वा ब्राउजर क्यास खाली deign थियो किनभने, आफ्नै व्यक्तिगत कम्प्युटर मा आदेश बहाल गर्न, र पैसा दिन छैन आफूलाई सिक्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो कम्प्युटरको, तपाईं आफ्नो भाग्य आफ्नै मा लिनुपर्छ हात।
म एक परिष्कृत कम्प्युटर प्रयोगकर्ता बोलाउन थियो। शायद, यो विश्वास गर्न गाह्रो छ, तर म कसरी एक पीसी, सम्भवत अहिले जो सम्झना, आधारभूत नियमहरू, र5वर्षीया बच्चा संग शुरू प्रयोग गर्न सिक्न आवश्यक छ। केही मानिसहरू नयाँ उपकरणहरू भिज्न एक लामो समय को लागि पुरानो स्कूल हो।
एक कम्प्युटर एक लगातार कष्टप्रद क्षण मा गरिएका छैन समस्या सुलझाने गर्न, म प्रोग्रामिंग त्रुटिहरू हटाउन आफ्नै हुन भनेर लाग्यो। म बिल्कुल साईट कम्प्युटर प्रयोगकर्तालाई सल्लाह दिन नि: शुल्क छ जो एक पोर्टल, देखे। यो सम्भव समय आफ्नै सिक्ने बचत गर्न गरे। भन्न अनावश्यक, म पीसी सेटिङ सुरु गर्ने निर्णय गरे। म कम्प्युटर सेटिङ2दिन म पहिले नै windose कसरी कन्फिगर गर्न थाह पछि, धेरै सजिलो थियो, भन्न हुनेछ, र एक समय एक स्थानीय नेटवर्क कसरी बनाउन सिक्न, तर लामो दुई घर कम्प्युटर रूपमा।
अब म एक पीसी र टिभीमा दुवै जडित उपकरणको रूपमा एक ल्यापटप खरीद सोच्न सक्षम थियो किनभने दुई पीसी को एक यस्तो नेटवर्क, धेरै सफल निस्कनुहोस् छ। अब म कसरी पीसी आफ्नो कम्प्युटर जडान गर्न जान्दछन्, र सिद्धान्त कसरी टिभीमा एक ल्यापटप जडान गर्न मा कौशल नजिकै। त्यसपछि म अभ्यास र यो ज्ञान लागू गर्न सक्षम थियो। पीसी गर्न TV जडान गर्न, बस HDMI केबल, टिभी र उपयुक्त आउटपुटहरू \_ इनपुटसहितका पीसी किन्न। मामला मा, तपाईं कसरी कम्प्युटरमा कम्प्युटरमा जडान गर्न अनुरोध छ भने, इन्टरनेट यहाँ मदत गर्न सक्छ।
यसलाई म जडान गर्न निर्णय गरेका छौं किन अनुमान गर्न सजिलो छ डेस्कटप कम्प्युटर टिभि गर्न। वैश्विक नेटवर्क मा निःशुल्क मनोरञ्जन सामाग्री को विविधता, र यति धार प्रयोग गरेर डाउनलोड चलचित्र हेर्न लोभ्याए। यसलाई म यो अनुकूल डाटा विनिमय संयन्त्र मनोरञ्जन क्षेत्र कस्ता मौकाहरू खोल्छ बुझे कि त थियो।
वर्तमानमा, म एक शक्ति प्रयोगकर्ता विचार गर्न सक्छौं - विंडोज समायोजन कसरी, फेला पार्न र वर्ल्ड वाइड वेब मा आवश्यक जानकारी डाउनलोड बुझ्छु। कारण पोर्टल उपयोगी शिक्षा मद्दत गर्न स्वतन्त्र थियो। त्यसैले, तपाईं आफ्नै ल्यापटप मा आदेश बहाल गर्न आफ्नै सिक्न र कसैले विन्डोज ब्यानर हटाउन, वा ब्राउजर क्यास खाली deigns कुरा को लागि ठूलो पैसा तिर्न छैन चाहनुहुन्छ भने, यो आफ्नै हातमा आफ्नो भाग्य लिन समय छ।
आधुनिक कम्प्युटर दृष्टि। कार्य र कम्प्युटर दृष्टि प्रविधि। अजिङ्गर मा कार्यक्रम कम्प्यूटर भिजन
के फ्लैश ड्राइव देखिने छैन भने?
को औंलाहरु मा Scaly छाला। के गर्ने?
कसरी काजाकिस्तान नागरिक गर्न रूसी नागरिकता प्राप्त गर्न? चरण पुस्तिका द्वारा चरण
दबाइ "Tsitramon": संरचना, संकेत
मनपर्ने गर्मी नुस्खा। Okroshka मेयोनेज
प्रमुख जानकारी एक प्रमुख रूपमा उद्यम को कार्ड
लेमन पेय नुस्खा: "osvezhAYS"
फलाम पानी शुद्धीकरण। फलाम पानी शुद्धीकरण को विधिहरू
तपाईं समर्थक बारी प्रोग्रामर जान्नु आवश्यक के